ကိုးရီးယား ဆောင်းအိုလံပစ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဖွင့်မိန့်ခွန်း | MoeMaKa Burmese News & Media
ကိုးရီးယား ဆောင်းအိုလံပစ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဖွင့်မိန့်ခွန်း
January 31, 2013ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၃
● ကျမ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အခမ်းအနားတွေ အားလုံးထဲမှာ ဒီအခမ်းအနားကတော့ စိတ်ကို အလှုပ်ခတ်နိုင်ဆုံးနဲ့ အားတက်စရာအကောင်းဆုံးပါဘဲ ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အားကစားသက်သက်ကိုသာ ကျင်းပနေတာမဟုတ်ဘဲ အရာအားလုံးထက် ပိုအရေးပါတဲ့လူ့သားရဲ့ စိတ် ဓါတ် ခွန်အား ကြီးကျယ်မှုစွမ်းအား (supremacy of human spirit) ကိုပါ အသိအမှတ်ပြုကျင်းပပေးနေလို့ပါဘဲ။
● အဲဒီစိတ်ဓါတ်ခွန်အားဟာ ဗဟုသုတပညာ၊ စိတ်ခံစားမှု၊ စီးပွားရေး စတာတွေထက် ပိုပြီး အရေးကြီးတယ်ဆိုတာရယ် …….၊ ‘’ မသန် စွမ်းသူဆိုတာ တကယ့်တကယ် ကိုယ်ခန္ဒာချွတ်ယွင်းနေသူတွေကိုသာခေါ်တာမဟုတ်ဘဲ အဲလိုချွတ်ယွင်းနေသူတွေကို ကရုဏာမေတ္တာ မထားနိုင်သူတွေကိုပါ ခေါ်တယ် ‘’ ဆိုတာရယ်ကို လူကြီးမင်းတို့က ဒီကနေ ပြလိုက်တာပါဘဲ ။
● မသန်းစွမ်းသူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေ ၊ နားလည်မှု မရှိတာတွေကို ကျမတို့အားလုံး အတူတကွ ကျော်လွှားနိုင်တယ်လို့ ဒီအခမ်းအနားကနေ သက်သေပြနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ မသန်းစွမ်းမှုဆိုတာ ထာဝရ မကျော်လွှားနိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ စိတ် ဓါတ်ဟာ ဘယ်လို မသန်စွမ်းမှုကိုမဆို ကျော်လွှားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ် ။
● ဒီနေ့ ကျမတို့တတွေဟာ လူသားတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ခွန်အား ဘယ်လောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာကိုသာ အသိအမှတ်ပြုကျင်းပတာ မ ဟုတ်ဘဲ လူသားတွေရဲ့စည်းလုံးမှု ဘယ်လောက်ကြီးမားတယ် (The Supremacy of Human Solidarity) ဆိုတာကိုလည်း အသိအ မှတ်ပြုကျင်းပနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
● ဒါကြောင့်ဘဲ ဒီအခမ်းအနားရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ ‘’ Together we can ‘’ ဆိုတာကနေ ကျမတို့တွေဟာ အခွဲခြားခံရသူတွေ ၊ အားနည်း အောင် လုပ်ထားခြင်းခံရသူတွေကို တကမ္ဘာလုံးသိအောင် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲနဲ့ တညီတညွတ်ထဲ အကူအညီပေးနေကြတာ ၊ ဂုဏ်ပြု နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီလူတွေကို သဘာဝတရားကြီးက အားနည်းအောင် လုပ်တာမဟုတ်ဘဲ လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုယ် တိုင်က ခွဲခြားဆက်ဆံအားဖြင့် အားနည်းသိမ်ငယ်အောင် လုပ်ထားတာပါ။ သူတို့ကို အားနည်းသူ အဖြစ်သတ် မှတ်ထားကြတယ် ၊ သူတို့ရဲ့ အားသာချက်ကို အရေးမပေးဘဲ သူတို့ရဲ့ အားနည်းချက်အပေါ် အာရုံထားခြင်းအားဖြင့် အားနည်းအောင် လုပ်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
● ဒီအိုလံပစ်ပွဲတော်ရဲ့ အခမ်းအနားမှုးက နိုင်တဲ့သူတွေထက် ရှုံးတဲ့သူတွေကို ဂုဏ်ပြုပေးမယ်ဆိုတော့ ကျမတစ်ခုကို သတိရမိပါတယ် ……တခါတုန်းက လူကြီးတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ပြေးပြီး နောက်ဆုံးမှ ပန်းဝင်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်က ‘’ ကျနော် နောက်ဆုံးက နိုင်တယ် ‘’ လို့ ပြုံးပြုံးလေး ပြောလိုက်တာကိုပါ ။ ကျမကတော့ အဲဒါကို ကောင်းလိုက်တာလို့ဘဲ တွေးမိပါတယ်……ရှေ့ဆုံးက ရှုံးရှုံး ၊ နောက်ဆုံး ကဘဲ နိုင်နိုင် အရေးမကြီးလှပါဘူး ။ အဓိကကတော့ စိတ်ဓါတ်ပါဘဲ ။
● လူကြီးမင်းတို့တွေ အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးကို ဘယ်လိုကျော်လွှားအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို လမ်းညွှန်ပြသခြင်းအားဖြင့် ကျမတို့ တိုင်း ပြည်မှာလည်း လူကြီးမင်းတို့ အများကြီး လာရောက်ကူညီပေးကြလိမ့်မယ်လို့ ကျမ မျှော်လင့်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဘဲ လူကြီးမင်း တို့ကို ကျမ ကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုပါတယ်…….ကျမတို့ ဘ၀လမ်းမှာတွေ့မယ့် အခက်အခဲတိုင်း၊ ဒုက္ခတိုင်းဟာ ကျော်လွှားလို့ရ တယ် ဆိုတာကို နားလည်စေတဲ့အတွက်ပါ။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
● (ဒေါ်စုပြောသွားတဲ့မိန့်ခွန်းအပြီးမှာ အခမ်းအနားကြေငြာသူ Kim Yu Na က မွေးရာပါ Down Sydrome ရောဂါ ခံစားနေရသူနှစ်ယောက်ကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ဘ၀မှာ သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်အိပ်မက်ဟာ ဘာလဲ လို့ မေးပါတယ် ။ သူတို့အလှည့်ပြီးတော့ ဒေါ်စုကိုလည်း What is your dream ? မေးပါတယ် )
● ဒေါ်စု ။ ။ ကျမဖြစ်ချင်တဲ့Dream ကတော့ အင်မတန်ရိုးရှင်းပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးကို ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့နေရာတခုဖြစ်အောင် ၀ိုင်း ၀န်း ကြိုးပမ်းကြရာမှာ ကျမတိုင်းပြည်ကိုလည်း ပါဝင်စေချင်ပါတယ်။ ကျမတို့ မြန်မာပြည်သူတွေကို အဲလိုလုပ်ရာမှာ သူတို့လည်းပါဝင်နိုင် ကြောင်းပြဖို့ အခွင့်အရေး ရစေချင်ပါတယ်။
(ဒေါ်စုပြီးတော့ Kim Yu Na က သူ့ရဲ့ ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့Dream ကို ဆက်ပြောပါတယ်။ အရင်တုန်းက သူ့ရဲ့ အိပ်မက်ဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ချန်ပီ ယမ်ဖြစ်ဖို့ ဖြစ်ကြောင်း ၊ အဲဒီအိပ်မက်ကို ၂၀၁၀ ဗန်ကူးဗား ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲမှာ အကောင်အထည်ဖော်လိုက်နိုင်ကြောင်း ၊ အဲဒါဟာ ငါလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း စသည်စသည်ဖြင့်ပါ ။
အသေးစိတ်ကလေးတွေကိုပါ ပြည့်ပြည့်စုံစုံကြည့်လိုပါက http://www.youtube.com/watch?v=Wln-VRO21-E&feature=share)
အပြည့်အစုံ မူရင်းအား ဤနေရာတွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:မှတ်စုမှတ်တမ်း	Comments are closed.
တူမောင်ညို - စစ် + ခရိုနီခေတ်မှာ ဗိုလ်ကြီး “ကယ်ရီ” ဖြစ်ပြီ	ကျော်ဟုန်း - အများနဲ့ မတူ တမူကွဲခြားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း	သိန်းမြတ် - သူရဲကောင်းတောင်ကြား	ကာတွန်း မောင်ရစ် - Pull my leg - ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ	ကာတွန်း လိုင်လုဏ် - လက်ရှိ မြန်မာ့ပညာရေး	အဆိုတော် တကိုယ်တော် ကော်နီ Connie 30 Dreams စင်မြင့်ဖျော်ဖြေပွဲ	ဖိုးသံ (လူထု) - ကျွန်တော်နဲ့ စန္ဒကိန္နရီ	ငြိမ်းချမ်းအေး - တော်လှန်ရေးဟာ စာသင်ခန်းက စရပါမယ်	ကာတွန်း လိုင်လုဏ် - အစွမ်းကုန်	မောင်ရင်ငတေ - နှစ်ဆယ်ကျော်အလွမ်း - ဘီကေကေအစုန်အဆန် (လေယာဉ်စီး၍ ခရီးနှင်မယ်)	မိုးမခ Kindel Store
လူမှုရှုခင်း ကောက်စာများ မောင်လူပေ - အမေတို့ရွာ (၅)
Hay Man Tha Zin - The Past goes on ...
ရောက်တတ်ရာရာ အတိုအစများ ဖလော်ရီဒါ၊ ဘိုကာရာတန် က မြန်မာစာပေဟောပြောပွဲ မြင်ကွင်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ ရှင်းတမ်း - အပိုင်း(၁)
တွင်းများ ... မြွေများ (Saung Luu)
ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) (19)
Twitter: moemakaကာတွန်း လိုင်လုဏ် – လက်ရှိ မြန်မာ့ပညာရေး ဇန်န၀ါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၅ http://t.co/k4VxDwJiTK about9hours ago ReplyRetweetFavoriteသစ်ကောင်းအိမ် – ငွေလရောင်ရဲ့ တိမ်းရှောင်သူ (အပိုင်း -၄) http://t.co/U7AncmLqXb about9hours ago ReplyRetweetFavoriteဂါမဏိ – ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်မှာ လက်မှတ်ထိုးစရာ … http://t.co/CwHUSsoDbW about9hours ago ReplyRetweetFavoriteမောင်ဖေသက်နီ – ရှေးခေတ်ဂရိနိုင်ငံရဲ့ အနုပညာလက်ရာမြောက် တိရစ္ဆာန်များအကြောင်း http://t.co/4NdzMfnaId about 13 hours ago ReplyRetweetFavoriteကာတွန်း မောင်ရစ် – Pull my leg – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ http://t.co/up6SZ6FC9A 02:34:29 AM January 29, 2015 ReplyRetweetFavorite@moemaka Copyright © 2015 MoeMaKa Burmese News & Media. All Rights Reserved.
By admin မိုးမခမဂ္ဂဇင်း အောက်တိုဘာလထုတ် ထွက်ပြီ၊ (အတွဲ၁၊ အမှတ် ၇၊ ၂၀၁၄) မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ၊ ၄၊ ၂၀၁၄...Read more » Recent CommentsHla Cho on ငြိမ်းချမ်းအေး – တော်လှန်ရေးဟာ စာသင်ခန်းက စရပါမယ်သစ်ကောင်းအိမ် – ငွေလရောင်ရဲ့ တိမ်းရှောင်သူ (အပိုင်း -၄) - Myanmar Information Zone on သစ်ကောင်းအိမ် – ငွေလရောင်ရဲ့ တိမ်းရှောင်သူ (အပိုင်း -၄)မောင်ဖေသက်နီ – ရှေးခေတ်ဂရိနိုင်ငံရဲ့ အနုပညာလက်ရာမြောက် တိရစ္ဆာန်များအကြောင်း - Myanmar Information Zone on မောင်ဖေသက်နီ – ရှေးခေတ်ဂရိနိုင်ငံရဲ့ အနုပညာလက်ရာမြောက် တိရစ္ဆာန်များအကြောင်းpaing g on ကျော်ဟုန်း – အများနဲ့ မတူ တမူကွဲခြားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျော်ဟုန်း – အများနဲ့ မတူ တမူကွဲခြားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း - Myanmar Information Zone on ကျော်ဟုန်း – အများနဲ့ မတူ တမူကွဲခြားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာကို အနည်းဆုံး ၁ ဒေါ်လာ လှူပြီး မိုးမခကို ကူညီပါ	မိုးမခမှာ ကြော်ငြာပါ